Fihetseham-po mahafinaritra amin'ny Photoshop hamoronana loha lehibe | Famoronana an-tserasera
Vokatra mahafinaritra amin'ny Photoshop hamoronana loha lehibe
Pablo Gondar | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials
Vokany mahafinaritra miaraka amin'ny Photoshop mamorona loha be amin'ireo sary rehetra tianao homena azy ireo fikitika mahatsikaiky sy manokana. Ity vokatra ity dia tsara ho an'ireo sarin'ny fianakaviana na namana mikatsaka ny hanana fahatsiarovana hafa momba ireo rehetra ireo izy ireo fotoana lehibe.
Mianara mamorona a vokany tena manintona azonao ampiasaina amin'ny sary isan-karazany, manomboka amin'ny sarin'ny namana ka hatramin'ny tetikasa sary izay mitaky hatsarana mitovy amin'ny fomba mpanjakavavin'ny fo avy any Alice in Wonderland.
Photoshop dia programa retouching sary quintessential izay mahatratra tena fahagagana tena zava-misy, fa tsy ny zava-drehetra tsy maintsy ho zava-misy, sa? afaka mamorona isika vokatra mahafinaritra izay ny zava-dehibe dia ny fikasihan-tanana mahafinaritra azon'ny sary, amin'ity tranga ity dia hianarantsika ny fomba hamoronana fahafinaretana vokany mafy loha.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra ny sarintsika ao amin'ny Photoshop, raha toa ka misy ambadika ny sarintsika dia tsy maintsy mamafa azy isika mba hamoronana ilay vokany.
1 Hamafana ny tany ambadika
1.1 Fafao ny mombamomba anao amin'ny famosaviana majia
1.2 Hamafa ny fiaviany amin'ny famafana majika
1.3 Hamafana ny any aoriana amin'ny fisafidianana ny sary
2 Miala amin'ny lohany!
3 Fihenan'ny vatana
Hamafana ny tany ambadika
Podemos fafao ny lafika amin'ny fomba isan-karazany:
Fampiasana ilay ozatra majika
Fisafidianana ny sary ary famafana ny ivelany
Fafao ny mombamomba anao amin'ny famosaviana majia
Azontsika atao ny mamafa ny fotony amin'ny fomba samihafa, miankina amin'ny sarintsika no ahafahantsika misafidy rafitra iray na iray hafa. Amin'ny tranga ohatra nampiasainay ny majika fitaovana wand satria milamina izy io, raha hampiasa an'io fitaovana io dia tsy maintsy ataontsika safidio ary kitiho Amin'ny ankapobeny, azontsika atao ny manova ny fandeferana mba hahatonga azy io ho marimarina kokoa na latsaka tsara.
Hamafa ny fiaviany amin'ny famafana majika
Raha milamina ny fiaviantsika dia afaka mampiasa ity fitaovana ity isika fafao haingana tsy misy sarotra. Raha hampiasa an'ity fitaovana ity dia mila misafidy azy fotsiny amin'ny sidebar isika ary tsindrio ny eo aoriana.
Hamafana ny any aoriana amin'ny fisafidianana ny sary
Ny fomba mahazatra indrindra mamafa ny background dia ny fampiasana a fitaovana fisafidianana raha hamafana ny ivelany ny sary dia afaka manao an'io miaraka amin'ireo fitaovana fifantina izay hitantsika isika Photoshop. Fitaovana tena tsara amin'ny fisafidianana ny andriamby loop izay tsikelikely dia hanao safidy amin'ny drafitra ny sary isika avy eo mankany amin'ny menio ambony fifantenana / avadika milaza Photoshop Tianay ny misafidy izay rehetra ivelan'ny safidinay, hamita ny tsindrio hamafana ary hamafana ny fiavianay tsy misy olana.
Miala amin'ny lohany!
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia tapaho ny lohanay modely afaka manavaka azy amin'ny sosona hafa avy eo ary manalalaka ny vatana.
Mora ity dingana ity satria iray ihany no tsy maintsy safidintsika fitaovana fisafidianana ary contour ny lohan'ny maodelintsika. Raha vantany vao manana an'io isika, ny zavatra manaraka hataontsika dia ampitaina amin'ny a sosona tsy miankina, noho izany dia tsindrio ny menio ambony sosona vaovao / amin'ny alàlan'ny fanapahana. Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hanana kapa vaovao miaraka amin'ny lohan'ilay maodely isika.
Ny dingana manaraka dia ny mampihena ny vatana ny maodelinay hitazonana azy ho kely araka izay tratra mba hahafinaritra kokoa ny vokany ary hahomby ny vokany mamoaka fihomehezana bebe kokoa.
Mba hampihenana ny vatana dia mila misafidy ny sosona misy ny vatana isika ary manindry ny hitsin-dàlana fifehezana + T, afaka mandeha any amin'ny menio ambony ihany koa isika manova ny fanovana.
Alohan'ny hampihenana ny vatana dia mety tsara raha afaka manova ny sosona ho Zavatra Inteligent ajanony izao tsy very kalitao rehefa manodikodina azy isika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy tsindrio ny sosona miaraka amin'ny bokotra havanana totozy ary tsindrio ny safidin'ny Avadiho ho zavatra maranitra.
Miaraka amin'ny dingana kely vitsivitsy nahatratra a sary mampihomehy afaka mamoaka ny fihomehezan'ireo namantsika sy fianakavianay amin'ny fomba hafa noho ity programa famerenana sary mahafinaritra ity. Tsy tokony hohadinointsika fa ny zavatra rehetra ianarantsika Photoshop Afaka manana fampiasana isan-karazany, amin'ity tranga ity dia nanao zavatra isika safidy sy fahafinaretana fa amin'ny fotoana iray hafa dia azontsika atao ny mampiasa ilay nianatra tamina tetik'asa sary, tsy ela akory izay dia hitako fa nisy fiatraikany tamin'ny afisin'ny taovolo iray ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Vokatra mahafinaritra amin'ny Photoshop hamoronana loha lehibe
A. velona dia hoy izy:
Salama ry namako, fahafinaretana lehibe hihaona amin'ny tranokalanay mahafinaritra.
Mampahafantatra ny tenako amin'ireo namako rehetra aho: any Mexico aho
Antonio no anarako, 69 taona (izay manome ha ha) nisotro ronono noho ny fibromalgia, ary tsara ny nandehanako (tamin'ny alàlan'ny Internet) hianatra tsikelikely amin'ny photoshop SC6.
Hatramin'ny nahitako ny photoshop dia toa tsy dia nihena ny fanaintainako, na dia andro vitsy aza tsy misy azo atao, fa ny faran'ny raharaha dia ny fialamboly ary vitako izany, ary amin'ny zavatra kely vita dia mahatsiaro tena faly aho.
Eny, araka ny nolazaiko, mandefa anao ny firariana soa indrindra avy any Mexico aho, ary misaotra an'i creativosonline, ary mifampijery eto isika.
Valiny amin'i A. vivas
Antonio Moubay dia hoy izy:
Faly aho fa tianao ny lahatsoratray ary mahita amin'ny Photoshop fanalefahana ny fahasosoranao.
Manasa anao aho hanohy hanao fampiharana miaraka amin'ity programa ity, fotoana tsara foana izao hanohizanao hianatra.
Fiarahabana avy any Madrid.
Valiny tamin'i Antonio Moubay
Ny alin'ny tranombakoka ao Madrid, faritra iray izay tsy azonao adino
Tipografia vokan'ny setroka miaraka amin'ny Photoshop